SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲအတွက်စာရွက်စာတမ်းများဖွင့်လှစ်မည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲများအတွက်သတင်းစာများကများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်
အောက်တိုဘာလ 2016, Los Angeles မှာ 24, ကာလီဖိုးနီးယားအပေါ် SMPTE 2016 ဆုပေးပွဲ။ (ရိုင်ယန် Miller ကဓာတ်ပုံ / Imaging က Capture)
SMPTE SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲများအတွက်သတင်းစာများကများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုဖွင့်လှစ်
White Plains, နယူးယော့ - မတ်လ 1, 2017 - အဆိုပါ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (၏ Society ကSMPTE(R))သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်, ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစာတမ်းများများအတွက်အဆိုပြုချက်ရှာကြံနေပါတယ် SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ (SMPTE အတွက် 2017), အောက်တိုဘာ 23-26, 2017, ဟောလိဝုဒ်ကယ်လီဖိုးနီးယား။ အဆိုပြုထားသောစာတမ်းများအချက်အလက်ဆိုင်ရာဖြစ်နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ, သုတေသန, တီထွင်မှုများ, applications များ, ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းမှသက်ဆိုင်ရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသောနည်းပညာတိကျတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုဖြေရှင်းရန်ရပါမည်။ abstraction နောက်မမေလတွင် 15 ထက်အွန်လိုင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
"အမျှ SMPTE "နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိန်မြှင့်သည်, ယင်း၏လာမည့်ရာစုပြောသည်ဝင်သော SMPTE ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးက Sara Kudrle, SMPTE သူချင်းများနှင့် SMPTE သောမတ်စ် Edwards ကနှင့်အတူ 2017 အစီအစဉ်ကိုကော်မတီက Co-ကုလားထိုင်။ "ဖန်တီးမှုဇာတ်လမ်းပြောပြ enable သောနည်းပညာများကိုပြီးသားသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများပြီ။ လက်ရှိပြောဆိုမှုများသူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်း impact ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပေါ်မှာအာရုံနှင့်အတူအိုင်တီနဲ့ cloud နည်းပညာ, virtualization နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးရှာဖွေစူးစမ်းနေစဉ် higher ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ, ပိုမြန်ဘောင်နှုန်း, ကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်နှင့်နည်းနည်းနက်နဲရာကိုမှန်မှန်မိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါကွန်ဖရမှာတင်ဆက်အဆိုပါစာတမ်းများသည်ဤနှင့်ရွေ့လျားမှုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ပုံဖော်သည်အခြားသော့ချက်မေးခွန်းများကိုသို့ delve ပါလိမ့်မယ်။ "
ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားစက္ကူအကြောင်းအရာများထိုကဲ့သို့သောအစွန်းရောက် high definition (UHD) အဖြစ်ဘာသာရပ်များပါဝင်သည်; အရောင်နဲ့ dynamic range ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, (စသည်တို့ကို OTT, ATSC 3.0, မိုဘိုင်း,) မီဒီယာဖြန့်ဖြူးများ၏အနာဂတ်; မီဒီယာအခြေခံအဆောက်အအုံ (SDI, အိုင်ပီ); လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု (ဖိုင်-based, အလိုအလျောက်); မိုဃ်းတိမ်ကိုနှင့် virtualized မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့; image ကိုရှာမှီးခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့; အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သိုလှောင်မှု, ပွနျလညျထူထောငျနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်; ရုပ်ရှင်ရုံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စီမံကိန်းနည်းပညာ; ပုံရိပ်တွေနဲ့အသံကလူ့အမြင်; ပုံရိပ်နဲ့အသံအရည်အသွေးနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး; အသစ်ကချုံ့နည်းစနစ်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်; အကြောင်းအရာနှင့်ကွန်ယက်ကိုလုံခြုံရေး; အသစ်သောအသံနည်းပညာများ, Display ရဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာ; အနာဂတ်မီဒီယာနည်းပညာ (virtual reality, တိုးပွားအဖြစ်မှန်, 360 ကဗီဒီယို); စက်သင်ယူမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုများအတွက်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုနည်းပညာ, နှင့်သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်သင်္ချာ (stem) မှာမတူကွဲပြားမှုတွေအားပေးအားမြှောက်။
အလားအလာရှိသောခေါင်းစဉ်များစာရင်းနှင့်အတူစိတ္တဇကိုတင်ပြရန်ညွှန်ကြားချက်များကို www တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။smpte.org / smpte2017 ။
အဆိုပြုထားသောစာတမ်းများ research- သို့မဟုတ်သီအိုရီ-oriented တင်ပြချက်များ, ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, လဲ tutorial, ဒါမှမဟုတ် application တစ်ခုသို့မဟုတ်အကောင်အထည်ဖော်မှု၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
SMPTE အစောပိုင်းသူတို့ရဲ့စက္ကူအဆိုပြုချက်တင်သွင်းစာရေးဆရာများအားပေး။ အကယ်. SMPTE မတိုင်မီနောက်ဆုံးနေ့မှစာတမ်းများတစ်ဦးသင့်လျော်ရွေးချယ်ရေးအားလက်ခံတွေ့ဆုံတစ်ခုကိုတင်ပြများအတွက်နောက်ဆုံးနေ့တိုးချဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သဘာဝတွင်စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ကြောင်းစာတမ်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ, မသူတို့အားပြီးသားထုတ်ဝေခဲ့ကြလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားစာတမ်းများပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းပါသည်။
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org ။
ကျော်ရာစုအဘို့, ဒလူအ Motion Pictures ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (SMPTE, အသံထှကျ "simp-Tee") က "talkies" ၏နိဒါန်းနှင့်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေရန်, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာများစွာကိုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှု၏အသေးစိတျအထဲကခွဲထားခဲ့သည်ပါပြီ HD နှင့် UHD (4K, 8K) TV ကို။ 1916 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းက Society ကစက်မှုလုပ်ငန်းအနှံ့ရွေ့လျားနေသည့်-ပုံရိပ်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်၎င်း၏အလုပ်တခုအော်စကာ (R) နှင့်မျိုးစုံသူဟာ Emmy (R) ဆုပေးပွဲကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ SMPTE အင်အားသုံးလက်ရှိယနေ့များမှာ 800 ထက်ပိုသောစံချိန်စံညွှန်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏, အကြံပြုအလေ့အထများနှင့်အင်ဂျင်နီယာလမ်းညွှန်ချက်များ, တီထွင်ခဲ့သည်။ SMPTE အချိန် Code ကို (TM) နှင့်နေရာအနှံ့ SMPTE အရောင်ဘား (TM) ကလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့အလုပျရုံဥပမာနှစ်ခုကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုတိယရာစုထဲသို့ဝင်သကဲ့သို့, လူ့အဖွဲ့အစည်းစံချိန်စံညွှန်းများရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပုံဖော်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း IT- နှင့် IP-based Workflows သို့ထပ်မံတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာအဖြစ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသေချာစေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေးထောက်ပံ့နေသည်။
SMPTE'' s ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ယနေ့ 7,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမိုပါဝင်သည်: ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်အမှုဆောင်အရာရှိ, ဖန်တီးမှုများနည်းပညာသုတေသီ, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးအစပျိုးဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစတေနာ့ဝနျထမျးသူကျောင်းသားများ။ ယင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကမိတ်ဖက် ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း (HPA) connection SMPTE နှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးပံ့ပိုးကူညီသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်။ ပူးပေါင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေး SMPTE www မှာရရှိနိုင်ပါပြီ။smpte.org / join ။
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE_Sara-Kudrle-2016.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: Sara Kudrle, SMPTE 2017 အစီအစဉ်ကော်မတီတွဲဖက်သဘာပတိ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE_Thomas-Edwards.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: သောမတ်စ် Edwards က, SMPTE 2017 အစီအစဉ်ကော်မတီတွဲဖက်သဘာပတိ
Image ကို Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE_SMPTE2016-Audience.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: ပရိသတ်ကိုမှာ SMPTE 2016 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20Opens%20Call%20for%20Papers%20for%20SMPTE%202017%20Annual%20Technical%20Conference%20%26%20Exhibition%[အီးမေးလျ protected]% 20-% 20https: //goo.gl/gdxje0
သတင်းစာများကများအတွက် Call သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန် မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင် စာတမ်းများ SMPTE SMPTE 2017 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က SoftAtHome, MStar, CES2017 ကြောငျးသား နည်းပညာ တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality 2017-03-01
ယခင်: Hitachi HDTV ကင်မရာများကို Willow Creek အဘိဓါန်အဝန်းဘုရားကျောင်းများအတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်အွန်လိုင်းကိုးကွယ်မှုအတွေ့အကြုံများ Enhance
နောက်တစ်ခု: လေးယောက်ကုမ္ပဏီများရည်ရွယ် Join